Apple Inoburitsa Yechishanu Betas yeTVOS 14 uye WatchOS 7 | Ndinobva mac
Apple inoburitsa yechishanu tvOS 14 uye watchOS 7 yekuvandudza betas
Apple ichangotanga yechishanu betas yemakambani matsva egore rino emidziyo yako yese. Vhiki mbiri chete mushure mekuburitsa betas yechina, yanga yave isingasviki awa kubva zvaita kuti cheshanu chisvike kune vanogadzira kuti vavandudze ekushandisa avo ekuyedza.
Uye ndinoti anenge ese, nekuti rave awa kubva iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 uye watchOS 7 zvakatangwa uye kwete trace ye macOS Big Sur.
Yange yave hafu yeawa kubva pashanduro yechishanu yekuvandudza mabhatani evasainzi veApple gore rino vakaburitswa. Zvese kunze kwe macOS Huru Sur.
Yakagadzirirwa yechina uye yechishanu chizvarwa cheApple TV mamodheru, iyo nyowani beta ye tvOS 14 Inouya mavhiki maviri mushure mekutanga kweyechina beta. Vakanyoresa vanogadzira vanogona kurodha iyo nyowani beta vhezheni yeTVOS 14 paApple TV kuburikidza neprofile iyo yakaiswa neApple's Xcode software.
WatchOS 7 Iri kuuya kudonha uku, uye kune toni yezvinhu inoda kuyedzwa pamberi pekupedzisira kugadzirisa kwarova vese vashandisi. Vagadziri vanogona ikozvino kurodha yechishanu beta vhezheni yewatchOS 7 kuti vaedze uye vagadzire matsva ekushandisa ekuona uye nezvinetso zvavo zvinoenderana.
Iwe unofanirwa kuisa a certificate paApple Watch, wobva warodha pasi software pane iyo iPhone inomhanyisa beta vhezheni yeIOS 14, wochinjisa, wobva wayivhura. Hazvina kuoma, asi zvinotora moyo murefu uye ungatofanira kugadzirisa dambudziko.
Apple inogara ichipa mhedzisiro yeIOS, iPadOS, watchOS, tvOS, uye macOS sekutarisa kwazvino vatadzi kana betas yeruzhinji gore rega.
Kunyangwe iwo mabetas achiwanzo kuita akatsiga, Inogona kunge iine zvikanganiso sezvo iri yekutanga vhezheni iyo inogona kudzivirira iko kujairika kushandiswa kweako iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV kana Mac.
Ndokusaka kubva pano isu tichigara tichikurudzira usaedze kubva kumberi betas kunze kwekunge iwe uri software yekugadzira kana kushandisa yeruzhinji betas nekuchenjerera. Kana iwe uchivimba nemidziyo yako, mirira iyo yekupedzisira vhezheni. Kunyangwe kana ari mabheji eruzhinji, anogona kukusiya wakarembera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa yechishanu tvOS 14 uye watchOS 7 yekuvandudza betas
Chibvumirano AppleCare + ine yakawanda nguva mushure mekutenga